सचिन परियार र रचना रिमालको पहिलो गीत “सेतो कपास”, सार्बजनिक भएको १ घन्टामै भयो भाइरल ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
January 27, 2021 AdminLeaveaComment on सचिन परियार र रचना रिमालको पहिलो गीत “सेतो कपास”, सार्बजनिक भएको १ घन्टामै भयो भाइरल ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
काठमाडौ । पछिल्लो समयका एकदमै भाईरल र चर्चित बाल गायकको रुपमा परिचिन नाम हो सचिन परियार जो गुल्मीका हुन । उनी यति धेरै भाईरल भएकी जहा गएनी उनका शुभचिन्तकहरुले उनको पछि लागेर फोटो खिच्न पनि पछि परेनन । हो आज उनै सचिन परियार र रचना रिमालको पहिलो गित सेतो कपास साबैजनिक भएको छ ।
सेतो कपासलाई नेत्र अर्यालले लेखेका हुन भने यसमा लय तथा संगित महेन्द्र भण्डारीको रहेको छ जस्मा स्वयम सचिन परियार र रचना रिमालको स्वर रहेको छ । यस गितलाई सबिन क्षेत्रीले निर्माण गरेका हुन भने सुरेश श्रेष्ठले खिचेका हुन र शिव पौडेलको सम्पादन रहेको छ । गुरुआमा स्मृति तिमिल्सिनाले यो गितलाई निर्देशन गरेकी छिन ।
पछिल्लो समयकी चर्चित गायिका रचना रिमाल र सचिनको यो पहिलो गित हो जहा दुबै जनको अभिनय पनि रहेको छ र साथमा रिना थापा मगर, अर्जुन कुव“र र सबिन क्षेत्रीको पनि अभिनय रहेको छ, हेरौ यो उत्कृष्ट भिडियो र मनपरे १—१ सेयर गर्नुहोला । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस्ः